श्रीमान पराजुलीः चार श्रीमतीका श्रीमान, घरमा जुवाँको खालदेखि देउवासँग एउटै थालसम्म ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
श्रीमान पराजुलीः चार श्रीमतीका श्रीमान, घरमा जुवाँको खालदेखि देउवासँग एउटै थालसम्म !
प्रकाशित मिति २६ पुष २०७४, बुधबार ०९:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दा श्रीमान भनिन्छ । श्रीमानको दोहोरो अर्थ हुन्छ । मानको पनि श्रेष्ठ र पति । लोकले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई मानका हिसाबले कुन श्रेणीमा राख्छ, बहश जारी छ । तर, पत्नीको संख्याका दृष्टिले श्रीमान पराजुली समकालीन समाजमा अग्रस्थानमा पर्ने देखिन्छ । अर्थात उनी चार श्रीमतीका श्रीमान हुन् ।
पराजुलीको वैवाहिक सम्बन्धका बारेमा पनि टिप्पणी हुन थालेपछि नेपाल आजले विभिन्न स्रोत प्रयोग गरी पराजुलीको पारिवारिक सम्बन्ध र स्वभावका बारेमा बुझ्ने प्रयास गरेको छ । र, चार श्रीमतीको प्रसंग सही रहेको देखिन्छ ।
चार श्रीमतीका पति भएपनि पराजुलीले गैरकानूनी विवाह अर्थात बहुविवाह भने गरेका होइनन् । तीन श्रीमतीको बियोग बेहोरेका पराजुली अभागी श्रीमानका रुपमा परिवारमा चिनिन्छन् । दुई श्रीमतीको निधन स्वभाविक देखिएपनि एउटीको हत्या नै भएको आंशका परिवार र आफन्तले गर्दै आएका छन् । पराजुलीसँग कटु सम्बन्ध रहेकी श्रीमती (माइली)को रहस्यमय ढंगबाट निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दियो ।
कान्छी श्रीमतीसँग बस्दै आएका पराजुलीले अन्य श्रीमतीबाट जन्मिएका सन्तानलाई पनि राम्रै हेरचाह गरेको बुझिएको छ ।
घरमा जुँवाको खाल !
पराजुली जुँवाको सौखिन हुन्, र उनको महाराजगञ्जस्थित निवासलाई उच्चकोटीको जुँवाघर मानिन्छ । त्यहाँ जाने मुख्य जुँवाडे प्रहरी, सेना र न्यायलयका उच्च तहका व्यक्ति हुन् । स्रोतका अनुसार हाल अख्तियार अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत प्रेम भट्टराई पराजुलीका प्रिय पात्र हुन् । उनैले जुँवाको क्रोम पु¥याउन सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
देउवासँग एउटै थाल !
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बिधा फरक परेपनि सम्बन्ध अति सुमधुर रहेको बताइन्छ । नेपाल विद्यार्थी संघको संस्थापक संयोजक देउवा र सदस्य पराजुलीको नियमित भेटघाट भइरहन्छ । उनीहरु व्यक्तिगत भेटघाटमा तँ को प्रयोग गर्दछन् । धेरैजसो एउटै थालबाट झिकेर खाना नास्ता खान्छन् ।
परिवारका प्रिय पराजुली !
बाहिर चर्चा गरिएजस्तो पराजुली छुद्र छैनन् । डाक्टर गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्ने प्रपञ्च गरेपछि उनी छुद्र होलान् भन्ने धेरैलाई परेको छ । तर, उनी व्यक्तिगतरुपमा मिजासिला छन् । भाउ नखोज्ने स्वभावका उनी आफन्तका प्रिय पराजुली हुन् । आफ्नो ठानेपछि जस्तोसुकै हिसाबले सहयोग गर्ने उनको स्वभाव रहेको बताइन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई सबैले साथ छाड्दा पनि पराजुलीले धाप मारिरहेका थिए । अहिले पनि सिंह र पराजुलीको सम्बन्ध गाढा छ । पराजुलीले भान्जा ज्वाइँ नकुल सुवेदीका लागि गरेको सहयोग परिवारभित्र उदाहरणीय मानिन्छ । आफ्ना थिए र एकै वर्षमा तीन पटक बढुवा हुन सकियो भन्दै ससुरालीप्रति सुवेदी नतमस्तक रहेको बताइन्छ । पराजुलीले आफ्ना नाता र सम्बन्धी भनेपछि पद र तह नहेरी गुन लगाउने गरेका छन् । सिपाहीलाई युएन मिसनमा पार्नेदेखि खरदारसुब्बालाई सरुवा गर्न समेत उनी भनसुन गर्न तयार हुने गर्दछन् ।
बाहिर जेजस्तो छबी बनेको भएपनि परिवार र आफन्तका बीचमा पराजुली देउतैको कोटीमा रहेको बताइन्छ । भलै, एउटी श्रीमतीको संकास्पद निधनका कारण उनका विरुद्ध लुकीछिपी बात गर्नेहरु नभेटिने होइनन् ।
Post View Count: 396
ज्येष्ठ नागरिक ग्राम (फोटोफिचर)
धमाधम फेसबुक एकाउन्ट बन्द
एजेन्सी । तपाईले फेक फेसबुक आइडी बनाउनु भएको छ ? २ वा दुई भन्दा बढी आइडी खोल्नु भएको छ…
​अकूत सम्पत्ति कमाउने हाकिममाथि मुद्दा दायर, भ्रष्टाचार गरी करोडौं कुम्ल्याएको आरोप
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उत्पादन सञ्चालन…
नेपाली महिलाको छाला तस्करी गरेर लिङ्ग र स्तनमा प्लाष्टिक सर्जरी !
काठमाडाैं । तीन वर्षअघि सुशीला थापा मुम्बइको कोठीबाट भाग्न प्रयासरत थिइन्…
पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा गोविन्द आचार्य प्यानलसहित निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा गोविन्द आचार्य निर्वाचित भएका छन्…
भाइटीकाको साइत बिहान ११ः५१ बजे उत्तम
काठमाडौं । यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौं एवं अन्तिम दिन शनिबार…